You are at:Home»Author: cms cms
Author cms cms
ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အတွေ့အကြုံနှင့် စေတနာရှိကြောင်း သူရဦးရွှေမန်း ပြောကြား
သာဂရ ဇန်နဝါရီ ၃၁ (Unicode) ထို့အတူ အကောင်အထည်ဖော်မည့်လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ကောင်းများလည်းရှိ်ပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ ပြည်သူများက တာဝန်ပေးအပ်လာပါက ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ တိုးတက်အေါင်မြင်အောင် ကောင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း သာဂရမြို့ရှိ ပါတီဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ်…
ပြည်သူကတာဝန်ပေးလာလျှင် တာဝန်ကျေအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီမံပြင်ဆင်ထားဟု သူရဦးရွှေမန်းပြောကြား
တောင်ငူ ဇန်နဝါရီ ၃၀ (Unicode) “ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ပြည်သူက အစိုးရတစ်ရပ်ကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်ရုံနဲ့ မလုံလောက်သေးဘဲ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ အစိုးရက ပြည်သူများရဲ့ဘဝ တိုးတက်မြင့်မားရေးနဲ့ ပြည်သူများရဲ့ လူမှုဘဝ…
(Unicode) ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီခေါင်းဆောင် သူရဦးရွှေမန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဩစတြေးလျသံအမတ်ကြီး H.E. Ms Andrea Faulkner အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့၊…
သူရဦးရွှေမန်း ရှမ်းပြည်နယ်မှ မြို့နယ်ပါတီကော်မတီဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံ
ကလော ဇန်နဝါရီ ၂၀ (Unicode) ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီခေါင်းဆောင် သူရဦးရွှေမန်းသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀ နာရီအချိန်တွင် ကလောမြို့၊…
သူရဦးရွှေမန်း ဖြူးမြို့ အထက(၁) အာစရိပူဇော်ပွဲတက်ရောက်
ဖြူး ဇန်နဝါရီ ၁၉ (Unicode) ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီခေါင်းဆောင် သူရဦးရွှေမန်းသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့၊ နေ့လယ် ၁၂ နာရီ ၃၀…
ဖြူး ဇန်နဝါရီ ၁၉ (Unicode) ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီခေါင်းဆောင် သူရဦးရွှေမန်းသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့၊ နံနက် ၉ နာရီအချိန်တွင် ဖြူးမြို့နယ်၊…
January 18 · (Zawgyi) ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီေခါင္းေဆာင္ သူရၪီးေရႊမန္းသည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သမၼတ H.E. Mr Xi Jinping အား…
သူရဦးရွှေမန်း တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နိုင်ငံတကာရေးရာဌာန ဝန်ကြီးအားတွေ့ဆုံ
(Unicode) ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီခေါင်းဆောင် သူရဦးရွှေမန်းသည် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်၊ နိုင်ငံတကာရေးရာဌာန ဝန်ကြီး H.E. Mr Song Tao အား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ…
သူရဦးရွှေမန်း တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(Unicode) ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ ခေါင်းဆောင် သူရဦးရွှေမန်းသည် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နိုင်ငံတကာရေးရာဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Ms Sun Haiyan ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ…